ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ရွာထဲကြွလာပါပြီ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ရွာထဲကြွလာပါပြီ…
Posted by lone on Nov 28, 2011 in Buddhism | 30 comments
ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပုံကို facebook myanmar sky link မှာတွေ့လို့ အားလုံး ကို ပြန် share လိုက်တာပါ…
ဆိုရင်တော့ အားလုံးပဲ…(lone မှားတာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်…lone ဘက်ကမှားတာပါ..ရွာသူရွာသားအားလုံးအမှန်ပဲလေ..)
သူကြီး ပထမ တစ်ခါတင်တာခေါင်းစဉ်မပါဘဲတင်လိုက်မိတယ်…ပုံတွေတင်တာ…ပုံမပေါ်ဘဲတင်တဲ့ link ပဲပေါ်လာလို့…ခေါင်းစဉ်မတပ်ဘဲ ပုံပေါ်ပါ့မလားဆိုပြီး စမ်းတင်လိုက်တာ…လေးစားရပါသော…(ငါးမစားချင်လို့ပါ)သူကြီး…ဖျက်ပေးပါနော်… သွေ့ပကျိ…ဘီယန်းဟဲ…
သူများရေးထားတဲ့ “စာ”တွေကိုတောင် ဒီအတိုင်းကြီး
“ကိုယ့်အယူအဆမပါ၊ ခရက်ဒစ်မပေး၊မူရင်းဆိုဒ်လဲမညွန်း”ဘဲ တင်နေတာတွေ
ဘာလို့တောင်းပန်နေရတာတုန်း ၊ ကုသိုလ်တောင်ရသေး။
ခုနက စာမပါတဲ့ပုံကိုကြည်ပြီး ဖူးရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။
စွယ်တော် က တကယ် အစစ်လားဟင်…။
အစစ်လားမစစ်လားတော့မသိဘူး…lone ရဲ့ facebook က myanmarskylink မှာ တွေ့လို့တင်လိုက်တာ…lone လည်း မသိဘူး….မှားသွားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါ..နော်…အချင်းချင်းတွေပဲဟာ……
မရဘူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဒီအတိုင်း တောင်းပန်လို့မရဘူး
အောင်လ သီချင်းနဲ့ တောင်းပန်
(စာကြွင်း။ သီချင်းနားထောင်ချင်လို့ သက်သက်ရစ်လိုက်သည်၊ ရစ်တော့ ပြီးပြီ ပြန်တော့ မပတ်နဲ့တော့နော်) ..
လုံး ရေ ကျေးဇူးနော်
မနေ့က ပါရမီလမ်းဘက် ရောက်တယ် ၊ စွယ်တော်ဖူးဘို့ တန်းစီနေတဲ့ လူအုပ်က ကျောက်မျက် အပေါက်ကနေ ပါရမီလမ်းအတိုင်း မေခလမ်းဆုံလောက်ထိ ရောက်တယ် ဒါ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသားက သပ်သပ် စီရတယ် ၊ လူတန်းကြီးက အရှည်ကြီး နေပူကြီးထဲမှာ လမ်းမှာ အအေးလှူနေတဲ့သူ ၊ သတင်းစာ ဂျာနယ် လှူနေတဲ့သူ ( ဘာမှယူမလာကြတော့ နေပူကြီးထဲမှာ လူတွေက ဒီအတိုင်း ရပ်နေကြရတာ သတင်းစာတွေ လိုက်ဝေတော့မှ ကန်တော့လေးတွေ လုပ်ပြီး ခေါင်းမှာ ဆောင်ထားတော့
နေပူနဲနဲသက်သာတာပေါ့ ) မူးလဲလို့ ယပ်ခပ်ပေးနေရတဲ့ အဘွားတွေလဲ တွေ့ခဲ့ရတယ် ။ကိုယ်တိုင် သွားဖူးဘို့ ဆိုတာ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ သွားကြည့်တဲ့ လူတွေတောင် ဒီလောက်ကောင်းကောင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ မနေ့က တန်းစီနေတာကို တွေ့လို့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ထားတာ ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ အလဲဗင်းက ပုံတွေ က ပိုကောင်းလို့ လင့်လေးပါ ပေးလိုက်တယ် တန်းစီ ရတဲ့ ဒုက္ခကို မြင်ရအောင်
ကျေးဇူး မလုံးရေ… အခုလို. အနီးကပ် ဖူးရတာ ကောင်းပါတယ်.. နို.မို.ဆို. တန်းစီ စစ်လားဆေးလားနဲ. အာရုံနောက်တော့ မဖူးရတော့ဘူး ထင်နေတာ.. ရွာထဲကြွလာတော့လဲ ဖူးလိုက်ရတာပေါ့..
အဲဒီလောက် အနီးကပ် တစ်ခါမှ မဖူးဖူးပါခင်ဗျား …
ကျေးဇူး တင်ပါ၏ ..။
ပင့်ဆောင်လာတဲ့ အတွက်လဲ သာဓုခေါ်ပါ၏..
ကိုယ်တိုင်သွားဖူးရင် အဲဒီလိုအနီးကပ်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး …
TV မှာ ရိုက်ပြတာ လဲ အနီးကပ် တခါမှ မတွေ့ ရ ဘူး။
သဘာဝ အတိုင်း ထားတာ ဆိုတော့ ဖူးရ တာ ပိုပြီး ကြည်ငြို စရာ ဖြစ်တယ်။
ဆိုတော့ကာ စွယ်တော်က ပုံနှစ်မျိုးဖြစ်နေပြီ
သောက်တော်ရေခွက်ထဲက ဆိုတဲ့ အရိပ်ပုံနဲ့
သွားဖူးခဲ့ပေမဲ့ အခုလိုအနီးကပ်မဟုတ်ပါ မြင်ရတာ(ဖူးရတာ)ကုသိုယ်ထူးပါ၏ ကျေးဇူးအထူးတင်လျှက်
စွယ်တော်ရွာထဲ ကြွလာမှပဲ ဖူးလိုက်ရတော့တယ်။ရေခွက်ထဲ၊ရေသန့်ဗူးထဲက ဖူးရတာပဲရှိတယ်။ အခုမှ ပဲ တကယ်အစစ်ဖူးရတော့တယ်။ စွယ်တော်က ရွာစွန်ရွာဖျားကို မကြွတော့ လူကိုယ်တိုင်ဖူးခွင့်ကမရှိဘူး။ သာဓု-သာဓု ပါဗျာ။ ( နှစ်ခေါက်ပဲ ဓု လိုက်အုံးမယ်နော်။ ) နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မပေါ်လာမှာစိုးလို့။
အခုမှ ပထမဆုံး အကြိမ်
အနီးကပ်သေချာ ဖူးမျှော်ခွင့် ရပါတယ် ခင်ဗျာ
ဘုရားဒကာ လုံး ၊ ခင်ဗျာ
တစ်ခုခုတော့ လွဲနေသလိုပဲ …
အန်တီဝေ ဘာလွဲတာလဲဗျ ၊ သေချာရှင်းပြပါဦး
မဝေ ရေ lone လည်း အနီးကပ်မဖူးဖူးတော့ သေချာမသိလို့ပါ…စွယ်တော်ပုံတွေ့တယ်ဆိုတော့
၀မ်းသာအားရနဲ့တန်းစီပြီး ဖူးစရာမလိုအောင် တင်လိုက်တာ…myanmar sky link ကတင်တဲ့ မရင်နှင်းကို ဒီနေ့မေးကြည့်တော့ သူလည်း lone လိုပဲ…သူငယ်ချင်းတွေဖူး လို့ရအောင်…တင်လိုက်တာတဲ့…သေချာတော့မသိလို့ပါတဲ့….စွယ်တော်တော့စွယ်တော်ပဲ….တရုတ်ပြည်က လာတဲ့စွယ်တော်တော့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ထင်တယ်….မြန်မာမှာရှိတဲ့စွယ်တော်များလားတော့မသိဘူး….lone လည်းတင်သာတင်ရတာ….lone ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့နော်….အပြင်မှာမဖူးဖူးလို့ပါ….
သီရိလင်္ကာကစွယ်တော် ပုံ ကလည်း အဲ့ဒီလိုပုံ ဘဲ။ ကလပ်ပေါ်မှာ အဖြူပါတ်လေးနဲ့ ဘဲ ။
ဒီပုံ ဟုတ်မဟုတ် သီရိလင်္ကာ က ဦးဇင်း ဆန်နီ နေမင်း ကို လျှောက်ထားကြည့်ပါလား ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီ့ ကလို့ထင်ပါတယ်။ မသေချာလို့ပါ။
sorry ပါ lone ရေ ..
အ၇င်တစ်ခါ အနီးကပ် ဖူးဖူးတာနဲ့ လွဲနေတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ထင်လိုက်မိလို့ပါ ….
ပေကျင်းက စွယ်တော်ပုံ အင်တာနက်ကနေရှာပေးလိုက်ပါတယ် …
ဆူး လည်း တရုပ်ပြည်မှာ အနီးကပ်သွားတော့ ဖူးဖူးတယ်။ ကင်မရာ မယူရဘူးဆိုတော့ လူပဲ သွားရတယ် ပစ္စည်းတွေ အပေါက်ဝမှာ ထားသွားရတာ ဆိုတော့ မေ့တေ့တေ့ ရယ်.. အခု မဝေ ပေးတဲ့ လင့်က ပုံက ပိုမှန်တယ်။ အနီးကပ် မြင်ခဲ့တဲ့ ပုံ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ထောက်ခံ ပေးပါတယ်နော်။
Lone ကို ရော Wai Wai ကို ပါ အရမ်း ကျေးဇူတင်ပါသည်။
ပို့ တခု တည်းမှာ စွယ်တော် နှစ်ဆူ လုံး ဖူးရ တာ ရွာသား တွေ အတွက် ကုသိုလ် ထူး ပေါ့။
နှစ်ယောက်စလုံး အလိုချင် ဆုံး ဆု ဖြစ်မဲ့ အပျိုကြီး မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
သာဓုပါ ဗျာ..သာဓု သာဓု……တန်းစီစရာမလိုပဲ အနီးကပ်ဖူးရတာ…ကျေးဇူးပါဗျာ…
George L. Austin. 1873
THE Portuguese historian, Diego de Couto, after describing the siege and reduction of Jaffna, in 1560, by the viceroy, Don Constantine de Braganza, proceeds as follows:
“Among the spoils of the principal temple, they brought to the viceroyatooth mounted in gold, which was generally said to be the tooth of an ape, but which these idolaters regard as the most sacred of all objects of adoration. The viceroy was immediately made aware that its value was in estimable, as the natives would be sure to offer vast sums to redeem it. They believed it to be the tooth of their great saint Buddha. This Buddha, so runs their legend, after visiting Lanka, travelled over Pegu and the adjacent countries, converting the heathen, and working miracles; and, death approaching, he wrenched this tooth from its socket, and sent it to Lanka, as the greatest of relics. So highly was it venerated by the Sinhala and by all the people of Pegu, that they esteemed it above all other treasures.”
The most remarkable object of interest to the European traveller, who finds himself at Kandy, in Ceylon, is, undoubtedly, the dalada, asserted to be the “sacred tooth” of Buddha, which, for so many years, nay, centuries, has commanded the unreasoning homage of millions of devotees. The fate of this renowned relic is so remarkable, and its destruction is related with so much particularity by the annalists of the period, that no historical doubt can be entertained, even were internal evidence wanting, that the tooth now exhibited at Kandy isaspurious and modern substitute for the original, destroyed in 1560.
The tradition handed down from generation to generation may bear brief repetition. After the funeral-rites of Gotama Buddha had been performed at Kusinara, B. C. 543, his “left canine tooth” was carried to Dantapura, the capital of Kalinga, where it was preserved for eight hundred years. The King of Kalinga, in the reign of Mahasen, being on the point of engaging inadoubtful conflict, directed, in the event of defeat, that the sacred relic should be conveyed to Lanka, whither it was accordingly taken, as described in full in the “Mahawanso,” the renowned metrical chronicle of the Sinhala.
In A. D. 1315, it was captured by the Malabars, and was carried back to Southern India; I but, by the prowess of Prakrama Bahu III., it was recaptured and returned to Pollonarua. From this date began and continued the troublesome times which followed the advent of the Portuguese in Lanka. The sacred tooth was changed about from place to place; until, at length, after wars and rumors of wars had weakened the strength and courage of the Sinhala, and had compelled them, asalast resort, to assemble at Jaffna, it finally fell into the possession of the Portuguese, at the fall of that city in 1560.
When the King of Pegu learned that the sacred tooth had fallen into the hands of Don Constantine, he sent an embassy to the latter to tender asaransom four hundred thousand crusadoes (about two hundred thousand dollars in gold), with offers of his alliance and services in many capacities, and an engagement to provision the Portuguese fort at Malacca as often as it should be required of him. The generous offer might have been accepted but for the interposition of the arch bishop, who resisted it as an encouragement to idolatry. The viceroy shared his opinion; the offer was spurned, the “tooth was placed inamortar by the archbishop in presence of the court, and reduced to powder and burned, its ashes being scattered over the sea.”
And now follows the strangest part of the delusion. At the birth of Brama, King of Pegu, the astrologers who cast his nativity predicted that he should marryadaughter of the King of Lanka, who was to have such and such marks and features, and certain proportions of limbs and figure. Brama, desirous to fulfil the prediction, sent ambassadors to Don Juan, King of Kotte, to beseech the daughter of the latter in marriage. Don Juan, unfortunately, had no offspring; but his chamberlain,acrafty fellow, suggested the substitution of his own daughter, and added impiety to fraud by feigning to the Peguan envoys that he still held, in secret, the genuine dalada, falsely supposed to have been destroyed by the Christians at Goa.
The ambassador and the talapoens evinced their delight on this intelligence, and be sought the chamberlain for permission to see it. He consented reluctantly, and, first obliging them to disguise themselves, he conducted them, by night, to his residence, and there exhibited the tooth in its shrine, resting on an altar, surrounded by perfumes and lights. At the sight they prostrated themselves on the ground, and spent the greater part of the night in ceremonies and superstitious devotion.
Suffice it to say that the girl and the sacred tooth were sent to Brama, by whom they were received with great magnificence and splendor.
Afterawhile, the King of Kandy, on learning the deception which had been perpetrated by his cousin of Kotte, apprised the Peguan sovereign of the imposture; and, to redress it, he offered him his own daughter in marriage, and proposed as her dowry the veritable tooth. Brama, says Faria-y-Souza, the unscrupulous author of the “Asia Portuguesa,” “gave ear to the ambassadors, but not to their information; and thus had Don Constantine de Braganza sold the tooth, as he was apprised there had not been two set up to be adored by so many people.”
The incidents of this narrative are too minute, and their credibility is established by too many contemporary and concurrent authorities, to admit of any doubt that the authenticity of the tooth now preserved in the Malagawa, at Kandy, is no higher than its antiquity, and that the supposed relic isaclumsy substitute, manufactured by the King of Kandy, in 1566, to replace the original dalada destroyed by the Portuguese in 1560.
It remains only to giveadescription of the shrine. The apartment in which the false relic is deposited is in the inmost recess of the vihara, or temple,asmall chamber the sanctum sanctorum – without windows, in which the air is stiflingly hot and heavy with the perfume of flowers. The frames of the doors are inlaid with carved ivory, and onamassive silver table stands the bell shaped carandua, the shrine, which encloses the relic, incrusted with gems, and festooned with jewelled chains.
The outer case containsanumber of others, similarly wrought, but diminishing in size, till on removing the inner oneagolden lotus is disclosed, in the centre of which reposes the mysterious tooth.
The internal evidence against the genuineness of the tooth is this: The tooth of Buddha was probably human, both as regarded its-size and appearance; whereas the one now exhibited, on sacred days, is nothing butapiece of discolored ivory, two inches long, one andaquarter in diameter.1
Its popular acceptance, notwithstanding this anomalous shape; may probably be accounted for by the familiarity of the Kandyans, under their later kings, with the forms of some of the Hindoo deities, among whom Vishnu and Kali are occasionally depicted with similarly projecting canines. However, we are inclined to believe that the teeth of the Buddha were not unlike those of his descendants, and that these latter are laboring under one of the most singular of the world’s delusions.
University of Michigan Digital Library Collections – Making of America
Title:	The Sacred Tooth of Buddha
Author:	George L. Austin
Journal: Appletons’ Journal.
Print: Vol. IX, No. 219 – 31 May 1873, – Pages 722 723
Publisher: D. Appleton and Company. New York.
Mr Rhys Davids writes “Jaffna is an outlying and unimportant part of the lankan Kingdom, not often under the poser of the Sinhala monarchs, and for sometime before this it had been ruled byapetty chieftain ; there is no mention of the tooth brought by Dantakumara-having been taken there,-an event so unlikely and of such importance that it would certainly be mentioned had it really occured. We have every reason to believe, therefore that the very tooth referred to by Sir CoomaraSwami is preserved to this day in Kandy”(The Academy, Sept 1874).
Official Website of the Dalada Maligva
Rebel attack unveils historic art – BBC News 2001 February 7th
See also Tale ofaTooth by Therese Yelverton, 1873, which hasadescription of the Kandy Perahara and some of the Mythology associated with the Dalada.
These are however travalogues by American tourists. I recomend reading the more complete and properly referenced, Memoir of the history of the Tooth-Relic of Ceylon by J. Gerson Da Cunha was published in 1875, by W. Thacker & Co., London; and was reprinted in 1996, by AES, New Delhi. Maybe someday I should OCR those 34 pages.
Editors Note: Text Proof read by Kavan although more OCR and reformating errors, probably still remain. I have modernized some words to PC English, such as changing Ceylon into Lanka, Cotta to Kotte and Singalese to Sinhala.
(1) The dimensions given are probably of the innermost ivory casket and not of the Dalada itself which may never have been exposed in recent history.
ကျေးဇူး ပါ မလုံးရေ (သူများတွေခေါ်လို.ပါ ကျွန်တော်လဲမသဲကွဲသေးပါဘူး) ခုလိုဖူးခွင်.ရအောင်တင်ပေးတဲ.အတွက်ပါ ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိ အာရုံပြုပြီးဖူးလိုက်ပါတယ်
စွယ်တော်ဆိုတာ ကန်တော့တယ်ဆိုတာ သွားတစ်ချောင်းကို ကန်တော့တာ မဟုတ်ပါဘူး ..။
တကယ်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ . နတ်လူ သတ္ထ၀ါ မြောက်များစွာကို အေးငြိမ်းရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ .. လူသားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ .. ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့လိုက်တာပါ။
ကန်တော့တတ်ရင် ရေသန့်ဘူးထဲက စေတီပုံလေးကို မြင်ရင်တောင် တကယ့် ဘုရားရှင်ကို ရည်စူးပြီး ကန်တော့လို့ ရနှိုင်ပါတယ်.။
ဒီလိုဆိုတော့ကာ စွယ်တော် အစစ်ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် အရေးမကြီးတော့ပါဘူး ..။
ဒါကြောင့် ပင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လုံးကိုရော လင့်များကို ဆက်လက်ညွှန်ပြခဲ့တဲ့ သူများကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ …..
People need some critical thinking. It’s obviouslyafake.